Liar Game 2: Reborn (2012) Liar Game The Final Stage 2010 ဇာတ်ကားရဲ့အဆက်အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb Rating (6.6) ရရှိထားပါတယ်။Liar Game ဆိုတဲ့ ဂျပန်စီးရီးကို အခြေပြုဖန်တီးတင်ဆက်ထားပြီး ကိုရီးယားစီးရီး Liar Game အဖြစ်လဲ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။Liar Game ဇာတ်ကားတွေကို https://channelmyanmar.org/?s=liar+game မှာရှာပါ။ File size…(999 MB) and (350MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:11:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
Liar Game 2: Reborn (2012)
Pitch Perfect (2012) IMDb Rating 7.2/10Rotten Tomatoes 81%Pitch Perfect ကားဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အမေရိကန် Mucical Comedy ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Barden တက္ကသိုလ်မှ Cappella သီဆိုကြတဲ့ မိန်းကလေးများသာပါဝင်တဲ့ Bella အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ် နိုင်ငံအဆင့် Cappella ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Aubrey က စင်ပေါ်မှာ အန်ချမိခဲ့တဲ့အတွက် ပွဲပျက်ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက် အဖွဲ့တော်တော်များများက ကျောင်းပြီးသွား၍ အဖွဲ့မှာ မပါဝင်နိုင်တော့သဖြင့် အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ရပါတော့တယ်။ရှေ့က Bella တွေရဲ့ပုံစံကတော့ သေးသေးသွယ်သွယ်၊ အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့သော် မနှစ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှားကြောင့် Bella အဖွဲ့ နာမည်ကျဆင်းခဲ့ရသောကြောင့် လူအများက ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံဖို့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခဲ့ရသောကြောင့် ရှေးက ပုံစံအတိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကို မရွေးချယ်နိုင်တော့သောကြောင့် အသံကောင်းပြီး သီချင်းဆိုတတ်တဲ့ မိန်းကလေးများကိုသာ ...
Wreck-It Ralph (2012) Ralph ဟာ သူ့ဂိမ်းထဲ က ပြီးပြည့်​စုံပြီး ​တော်​​နေတဲ့ ​ကောင်​လိုမျိုး အချစ်​ခံချင်​သူပါပြသနာက လူဆိုး​​တွေကို ဘယ်​သူမှမချစ်​​ကြတာပါပဲဒါ​ပေမဲ့ သူရဲ​ကောင်း​တွေကို​တော့ ချစ်​ကြပါတယ်​ဒီ​တော့ ဆားဂျင့်​အဖြစ်​​ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်း​ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ​တော့ အဲ ဂိမ်းကို သူ့အတွက်​ သူရဲ​ကောင်းဖြစ်​ဖို့ အခွင့်​အ​ရေးလို့ မြင်​သွားပါတယ်​သူဟာ ဂိမ်းထဲ ကို ရိုးရှင်းတဲ့ပလန်​နဲ့ ဝင်​သွားတယ်​ နိုင်​ခဲ့​ပေမယ့်​ မကြာခင်​မှာပဲ အရာအားလုံးပျက်​စီးသွားခဲ့ပါတယ်​ဒီအခါမှာ သူဘာ​တွေဆက်​လုပ်​မလဲဘာ​တွေ ဆက်​ဖြစ်​လာမလဲသူဖြစ်​ချင်​တဲ့ သူရဲ​ကောင်း​ရော ဖြစ်​လာပါ့မလားဆိုတာ​တော့ Wreck-It Ralph ဆိုတဲ့ ၂၀၁၂ ထွက်​ Animation ကား​လေးထဲမှာ ဆက်​လက်​ကြည့်​ရှုကြပါIMDb rating 7.7 ထိရထားတဲ့ ကာတွန်း​လေးမို့ လက်​မလွတ်​သင့်​တဲ့ ဇာတ်​ကား​လေးပါ File Size : (850 MB) and (373 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 41min Format : ...
IMDB: 7.7/10 307,185 votes
Brave (2012) အခုမိတ်​ဆက်​​ပေးမယ့်​ ဇာတ်​ကား​လေးက​တော့ Disney ချစ်​သူ​လေး​တွေရဲ့ အသည်းစွဲ အနီ​ရောင်​ဆံပင်​​လေး​တွေနဲ့ မာရီဒါဆိုတဲ့ မင်းသမီး​လေးအ​ကြောင်း ရိုက်​ထားတဲ့ Brave ဆိုတဲ့ Animation ကား​ကောင်း​လေးတစ်​ကားပါIMDb 7.1 ထိရထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​ကောင်း​လေးပါ မာရီဒါ​လေးဟာ မင်းသမီးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ​နေထိုင်​ပြုမူရမှာ​တွေနဲ့ ဆန့်​ကျင်​တဲ့ မြားပစ်​တာ မြင်းစီးတာ​တွေကို အရမ်းကို စိတ်​ဝင်​စားပါတယ်​သူ့မိခင်​က သူ့ကို မင်းသမီးတစ်​​ယောက်​လို ပြုမူ​နေထိုင်​ဖို့ အမြဲဆုံးမ​ပေမဲ့ သူနားမ​ထောင်​ပါဘူးတ​နေ့​တော့ သူမဟါ မင်းသမီးတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လက်​ထပ်​ဖို့ ပြင်​ဆင်​ရဖို့ ဖြစ်​လာပါတယ်​ဒီအခါ သူမဟါ မိခင်​ဖြစ်​သူကို ဆန့်​ကျင်​ပြီး ထွက်​​ပြေးရင်း စုန်းမတစ်​​ယောက်​နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်​စုန်းမက သူ့မိခင်​ကို စိတ်​​ပြောင်းသွား​အောင်​ လုပ်​​ပေးမယ်​ဆိုပြီး ကိတ်​မုန့်​တစ်​ခု​ပေးလိုက်​ပါတယ်​မာရီဒါ​​လေးဟါ အိမ်​ပြန်​လာပြီး သူ့မိခင်​ကို​ကျွေးလိုက်​တဲ့အခါမှာ​တော့ ရလဒ်​က သူ​မျှော်​လင့်​မထားတာ.ဖြစ်​လာခဲ့ပါ​တော့တယ်​ဒီ​တော့ သူ့​ကြောင့်​ ဖြစ်​သွားရတဲ့ အမှားကို ပြန်​ပြုပြင်​​ပေးနိုင်​ဖို့ ကြိုးစားရတဲ့အခါ မာရီဒါ​လေးအတွက်​ ဘယ်​လိုအခက်​အခဲ​တွေကြားရုန်းကန်​ရမလဲသူဘယ်​လိုစွန့်​စားရလဲ ဆိုတာ​တွေကို စိတ်​လှုပ်​ရှားဖွယ်​ ရိုက်​ကူး​ပေးထားတာပါကြည့်​ဖူးပြီးသား Disney ...
IMDB: 7.1/10 311,357 votes
The Lucky One (2012) The Lucky One (2012)_____IMDb - 6.5/10 ရိုမနျတဈဆနျခငျြတဲ့ RS တှနေဲ့ ကွညျ့ပွီး အားကခြငျြတဲ့ FA တှအေတှကျ နာမညျကွီး Romance ရုပျရှငျကားတဈကားကို တငျဆကျပေးလိုကျပါပွီ။The Lucky One ရုပျရှငျဟာ နာမညျကြျောအခဈြဝတ်ထုရေးဆရာကွီး Nicholas Sparks ရဲ့ The Lucky One ဆိုတဲ့ဝတ်ထုကို ပွနျလညျရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ဒီရုပျရှငျဟာ အထူးသဖွငျ့ လူငယျမိနျးကလေးမြားကွားမှာ အတျောလေးရပေနျးစားပွီး တျောတျောမြားမြားလဲသိကွတဲ့ ရုပျရှငျကားတဈကားဖွဈပါတယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ လိုဂနျဟာ အီရတျမှာ စဈမှုထမျးနတေုနျး မိနျးမခြောတဈယောကျရဲ့ဓာတျပုံကို ရှာတှခေဲ့ပါတယျ။စဈထဲမှာ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးတှေ သဆေုံးသှားခဲ့လို့ စိတျထိခိုကျနခေဲ့ပွီး စိတျကူးတညျ့ရာလြှောကျလုပျရငျး ဒီဓာတျပုံထဲက မိနျးကလေးကို လိုကျရှာဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။ဓာတျပုံထဲက ကောငျမလေးကို သူတဈခါမှလဲမမွငျဖူးသလို နာမညျတောငျမသိပါဘူး။သူ့မှာ ဒီမိနျးကလေးနဲ့ပတျသကျတာဆိုလို့ ဒီဓာတျပုံတဈပုံထဲရှိတာပါ။ဓာတျပုံတဈပုံကနေ လိုဂနျတဈယောကျ ကောငျမလေးကိုဘယျလိုရှာမလဲ၊ ရှာတှရေ့ငျရော ကောငျမလေးရဲ့အခွအေနကေ ဘယျလိုမြိုးလဲ၊ဘာအခကျအခဲတှကွေုံတှရေ့နိုငျမလဲဆိုတာတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာ ဆကျလကျစီးမြောရငျး ခံစားလိုကျကွပါ။နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲ Zac ...
IMDB: 6.5/10 99,625 votes
Chinese Zodiac (2012) ဒီတဈခါ မိတျဆကျပေးမှာကတော့ လူကွီးတှကေော ကလေးတှပေါမကနျြ အားလုံး မသိသူမရှိကွိုကျကွတဲ့ မငျးသားကွီး Jackie Chan ရဲ့ဇာတျလမျးလေးပါ။ တရုတျသမိုငျးမှာ အစဉျလာကွီးမားခဲ့တဲ့ ရှေးဟောငျး ရာသီခှငျတိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ကွေးသှနျးခေါငျး ရတနာကို ရှာဖှခွေငျးပါပဲ။ ဒီကားမှာ Jackie Chan က Treasure Hunter ပုံစံနဲ့ သရုပျဆောငျထားပွီး ဒီရတနာပစ်စညျးတှကေို တရားသော၊ မတရားသော ကွိုကျတဲ့နညျးလမျးနဲ့ ရှာဖှဖေို့ ငှားခံရပါတယျ။ ရှာဖှခေိုငျးသူတှကေလညျး ဒီရတနာတှကေို ငှကွေေးနဲ့အခွားနိုငျငံမြားကိုလလေံတငျဖို့ကအဓိက ပါ။ အစောပိုငျးတုနျးမှာ ဒီပစ်စညျးတှကေို ငှကွေေးအတှကျသာအဓိက ထားရှာဖှခေဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ဒီပစ်စညျးတှဟော သူတို့နိုငျငံသမိုငျးကွောငျးမှာ ဘယျလောကျအရေးပါခဲ့လညျးဆိုတာကို သိရပွီးနောကျ Jackie Chan ဘာတှဆေကျလုပျလညျးဆိုတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ Jackie Chan အပါဝငျ သူတို့ရဲ့ Treasure Hunter Group မှာ Daniel Wu လိုနာမညျကွီးမငျးသားတှလေညျးပါဝငျတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒီကားဟာလညျး action တှေ ၊ ...
IMDB: 6.7/10 200,000 votes
Upside Down (2012) Upside Down (2012)_____IMDb - 6.4/10 ဒီရုပျရှငျကားလေးကို V Day Feb 14 မှ တငျဖို့ ဘာသာပွနျသူက ပွောထားပါတယျ... ရုပျရှငျကား ရဲ့ အစ မှာတော့ ကနြျောတို့လို ကမ်ဘာကွီးမဟုတျပဲ ဆှဲငငျအား ၂ ခု နဲ့ ကမ်ဘာ ၂ ခုဖွဈနပေါတယျ.. သူတို့ အချေါအဝျေါကတော့ အပျေါ နဲ့ အောကျဘကျ တဲ့... တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ နီးနီးကပျကပျ မွငျနရေပါတယျ... ဒါပမေယျ့ တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျ သှားလညျခှငျ့ လုံးဝ မရှိပါဘူး... တဈရကျမှာတော့ ကောငျလေး တဈယောကျဟာ အပျေါ သို့ အောကျဘကျ က ကောငျမလေး တဈယောကျကို ခဈြမိသှားပါတယျ အဲ့ဒီဘကျကိုလဲ ခိုးခိုးပွီးသှားလညျပါတယျ... သူတို့ ၂ ဦး ပေါငျးစညျးဖို့ ကမ်ဘာ နှဈခုကိုလဲ ပေါငျးစညျးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ.. V Day အတှကျ ပွညျ့စုံတဲ့ အခဈြဇတျလမျးလေး တဈခုရရှိမယျလို့ ရညျညှနျးလိုကျပါရစေ....ဒီကားလေးကို ဘာသာပွနျသူကတော့ MT (UCSY) ဖွဈပါတယျ (သဈဆနျးခနျ့)File ...
IMDB: 6.4/10 68,789 votes
Ek Tha Tiger (2012) ဒီကားလေးက IMDB 5.3 ရထားတဲ့ကားလေးပါမြန်မာလိုကတော့တစ်ခါတုန်းက ကျားတစ်ကောင် ရှိခဲ့သည်တဲ့အိန္ဒိယ နဲ့ ပါကစ္စတန် သူလျှိုတွေကြားရိုက်ကူးပြထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါTiger (ဆလက်မန်ခမ်း) ဟာအိန္ဒိယ အထူးစပိုင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးRAW အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက်အောက်မှာ လုပ်ကိုင်ရသူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပါကစ္စတန် သူလျို ISIS များအားနှိမ်နင်းရမည်ဖြစ်ပါတယ်တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ဆရာ goyi ရဲ့Mission အရ ပါကစ္စတန် ရဲ့အကြောင်းအစကို လိုက်ပြီး ရှာဖွေရတော့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Tiger ဟာ ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ဦးဆီ သွားပြီးပါကစ္စတန် သမိုင်းကြောင်းကိုစတင်စုံးစမ်းခဲ့ပါတယ်ထိုပရော်ဖက်ဆာမှာ မည်သူ့မှ တပည့်အဖြစ် လက်မခံခဲ့သလိုTiger ဟာလည်း ငြင်းပယ်ခံခဲ့ပါတယ်Tiger ဟာ တပည့်အဖြစ် လက်ခံပေးရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးZoya ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာတော့ zoya (ကတ်ထရီနာ ကေ့ဖ်)အကြောင်းလည်း ပြောပြချင်ပါတယ်Zoya ဟာ ပရော်ဖက်ဆာကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးအက သင်တန်းတစ်ခုမှာ တက်ရောက်နေသူပါဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့Tiger. တစ်ယောက် ပရော်ဖက်ဆာ တပည့်အဖြစ်တွေ့ရဦးမည်လောပါကစ္စတန် သမိုင်းကြောင်းကို စုံစမ်းနိုင်မည်လောTiger နှင့် zoya တို့၏ ဘ၀တို့ရှေ့ဆက် ...
Cool Kids Don’t Cry (2012) Cool Kids Don't Cry (2012)IMDb - 7.5/10_____Rotten - 66% Channel Myanmar ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ဒီတဈခါတငျဆကျပေးမယျ့ဇာတျကားလေးကတော့ Director Dennis Bots ရဲ့ IMDb Rating 7.5 ရထားတဲ့ Drama Kids&Familyကားလေးဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားနမညျကတော့ #Cool-kids-Don’t cry ပါ။ ဒီဇာတျလမျးမှာဆိုရငျ ….. အကီ ဆိုတဲ့၈တနျးကြောငျးသူလေးမလေးက သူမရဲ့ကငျဆာရောဂါကိုအရှုံးမပေးပဲနောကျဆုံးထိ သတ်တိရှိရှိရငျဆိုငျသှားပုံတှကေို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ အကီကဘောလုံးကစားရတာကိုခဈြမွတျနိုးပွီး ယောကျြားလေးတှနေဲ့တနျးတူကစားနိုငျသူဖွဈတယျ။ ကစားတိုငျးလညျးဒဏျရာတှခေဏခဏရတတျသူလေးပေါ့။ ဒီဒဏျရာတှအေပျေါမှာလညျး အကီကသိပျfeelမနတေတျပွနျဘူး။ အကီက မဟုတျမခံ စှာကယျြမလေးတဈယောကျလညျးဖွဈတယျ ခြုပျခယျြတာကိုလညျးမကွိုကျပွနျ။ ဒါပမေယျ့မထငျမှတျထားတဲ့အခြိနျမှာကံကွမ်မာဆိုးတဈခုက သူမဘဝထဲ ရုတျတရကျဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ထိခိုကျဒဏျရာကွောငျ့ ဆေးသှားစဈကွညျ့မိရာက စပွီးသူမမှာ ကငျဆာရောဂါရှိနမှေနျးသိခဲ့ရပါတယျ။ လူတိုငျးသိကွတဲ့အတိုငျးရောဂါခံစားနရေပွီးဆိုရငျ အရငျဆုံးဖွဈတာက Depressionဝငျကွတာပါပဲ။ ရောဂါကတဈမြိုး depressionကတဈမြိုးနဲ့ သတျမှတျကာလအခြိနျထိတောငျ အသကျရှငျနနေိုငျသှားသူတှကေ ရှားပါတယျ…. ရောဂါဖွဈနခြေိနျမှာ ကိုယျ့ဘာသာ ရငျဆိုငျရပျတညျဖို့ဆိုတာတကယျမလှယျတဲ့ကိစ်စပါ.. အားလုံးရဲ့ကူညီဖေးမမှုတှလေိုအပျသလို ကိုယျတိုငျလညျးစိတျဓာတျခိုငျမာမှသာ အဆုံးထိခုခံနိုငျကွမှာပါ… ကဲ…..ဒီဇာတျလမျးလေးထဲမှာတော့ အကီကကငျဆာရောဂါကို သတ်တိရှိရှိဘယျလိုရငျသှားမလဲဆိုတာနဲ့ သူမသူငယျခငျြးတှကေရော ဘယျလိုကူညီဖေးမကွမလဲဆိုတာ ကွညျ့သငျ့တဲ့ကားလေးတဈကားပါ။ Qty – 720P Bluray Duration – 1hr 36min Gern – Drama, Fantasy File Size – 786 MB Translator – ...
IMDB: 7.5/10 2,995 votes
The Dark Knight Rises (2012) Unicodeဒီတဈခါတော့ ပရိတျအကွိုကျ Superhero ဇာတျကားဖွဈတဲ့ The Dark Knight Rises ဇာတျကားနဲ့ မိတျဆကျ ပေးခငျြပါတယျ။ ဒီကားက Christopher Nolan ရဲ့ Batman Trilogy မှာ နောကျဆုံး ဇာတျကားဖွဈပွီး၊ မငျးသား Christian Bale ရဲ့ နောကျဆုံး Batman ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ Batman ပရိတျသတျ တှအေားလုံးနီးပါးရဲ့ အားပေးမှုကိုရခဲ့ပွီး၊ အကောငျးဆုံး Superhero ဇာတျကားလို့ သတျမှတျထားတဲ့ The Dark Knight ရဲ့ နောကျဆုံးပိတျလညျးဖွဈသလို၊ Epic Ending ဖွဈမယျလို့ ပွောထားခဲ့လို့ ဒီကားကို လူတှစေိတျဝငျစားခဲ့ကွပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ ထငျသလောကျ ဖွဈမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုပွောလို့ မကောငျးတာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပါ။ The Dark knight လောကျမကောငျးတာပဲရှိပါတယျ။ဇာတျလမျးအစမှာ Bruce Wyane က ၈နှဈလုံးလုံး အိမျထဲမှာပဲနနေပွေီးတော့၊ ...
The Silent War (2012) CM ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါ Silent War ဆိုတဲ့ တရုတ်ကား ကောင်းလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ "Ting feng zhe" ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး တရုတ်ဝတ္ထု အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ 1949 ခုနှစ် ပြည်တွင်းစစ် အပြီးမှာ တရုတ် အစိုးရဟာ ပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ကူမင်တန် သူလျှို တွေကို လိုက်လံ ရှင်းလင်းနေရဆဲပါ။ ဒီလိုရှင်းလင်းတဲ့ နေရာမှာ လျှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီး ကူမင်တန်တွေ ပေးပို့တဲ့ ကြေးနန်း သတင်းပို့ချက်တွေကို ရယူကာ လိုက်လံရှင်းလင်းရတာပါ။ ဒီလို လုပ်ဆောင် ရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာ ကြေနန်း ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ချန်နယ် ၁၂၀ လုံးပျောက်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ အတွက် ရန်သူရဲ့ အရေးကြီးသတင်းတွေကို ကြားဖြတ်ဖမ်းယူဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီလို အချိန်မှာ ...
IMDB: 6.2/10 1,205 votes